कृषि उत्पादनसँगै उद्योग स्थापनाको सम्भावना छ | गृहपृष्ठ
Home विकास कृषि उत्पादनसँगै उद्योग स्थापनाको सम्भावना छ
विकास, विकास संवाद 218 views
कृषि उत्पादनसँगै उद्योग स्थापनाको सम्भावना छ
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख सियाराम कुशवाहस“ग नगर विकासका योजनाबारे आर्थिक अभियानका दीपेश पौडेलले गरेको कुराकानीको सार
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख
सियाराम कुशवाहस“ग नगर विकासका योजनाबारे आर्थिक अभियानका दीपेश पौडेलले गरेको कुराकानीको सार
नगरको समग्र विकासका लागि कस्ता योजना छनोट भएका छन् ?
कटहरिया नगरपालिकाले विशेषगरी कृषि उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । नगरका जनतालाई समृद्ध बनाउन ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ नारा लिइएको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर–३ बिर्ती प्रस्टोका बिरुवा उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । नेपालका विभिन्न स्थानबाट बिरुवा खरीद गर्न बिर्ती प्रस्टोका पुग्नेहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि कृषिक्षेत्रमै नगरपालिकाले ध्यान दिएको हो । नगरपालिकाको कुल बजेटको ३० प्रतिशत कृषि विद्युतीकरणमा विनियोजन भएको छ । सिँचाइको उचित प्रबन्ध भएपछि कृषकले बेमौसमी खेती गरेर उत्पादन बढाउँछन् । दोस्रो योजनामा शिक्षा छ । यसका लागि १५ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको छ । छात्रालाई सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्न साइकल वितरणका साथै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि अनुदानसमेत दिने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महŒव दिएका छौं । औषधि खरीददेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न समस्या न्यूनीकरण गरी सहज र सरल तरीकाले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिका प्रतिबद्ध छ । नगरको समस्याको रूपमा रहेको सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन गरी झुपडीमुक्त नगर बनाउने दीर्घकालीन योजना नगरपालिकाले लिएको छ ।
यीमध्ये प्राथमिकताका योजना के के हुन् ?
यस नगरपालिकाको विशेष प्राथमिकता कृषिक्षेत्र हो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएपछि कटहरिया नगरपालिका समृद्ध हुन्छ । यसका लागि सडक पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । मुख्य राजमार्गसँग यस नगरपालिकालाई जोडिसकेकोले उत्पादित कृषि सामग्रीलाई बजारीकरणको समस्या हुँदैन । अर्को दीर्घकालीन योजना जनकपुरदेखि वीरगञ्जसम्मको जोड्ने सडक हो । कटहरिया नगरपालिकाको पश्चिमतर्फ अधिकांश स्थानमा पुल निर्माण भइसकेका छन् भने महम्मदपुरसम्म पुल बनिसकेको छ ।
यी योजना सम्पन्न गर्न नगरपालिकालाई कति बजेट आवश्यक छ र त्यसका स्रोत के–के हुन् ?
गाविसलाई समेटेर नगरपालिका घोषणा भएकोले आन्तरिक स्रोत खासै छैन् । नगरभित्र २५ ओटा इँट्टा उद्योग सञ्चालनमा छन् । लालबकैया नदीमा भएका गिट्टी, बालुवा पनि आय स्रोतमा पर्छन् । यो वर्ष मालपोत कर सङ्कलन भएको छ । स्प्रीड उत्पादन तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चिनी उद्योगसमेत यस नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतभित्र पर्छन् । त्यति मात्र नभई अगामी वर्ष नगरपालिकाले कृषि फार्म स्थापना गरी १० बिगाहामा पोखरी बनाएर माछापालन, अग्र्यानिक तरकारीखेती र अण्डा उत्पादन गर्नेछ । यसका लागि आन्तरिक स्रोत नगरपालिकाले नै सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अहिले स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न के के चुनौती देख्नुहुन्छ ?
न्यायिक समिति नै स्थानीय तहको जिम्मामा छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छन् । त्यसैले, यो एउटा पूर्णरूपमा सरकार हो । नगर प्रहरीदेखि संविधानले कल्पना गरेको गरेअनुसार अन्य काम गर्न सहज छैन । नयाँ नगरपालिका घोषणा भए पनि सबैको मानसिकता पहिलेकै छ । नगरपालिकाले नियम कानून बनाउन बाँकी छ । नगरपालिकामा पुगेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नै छैन जनतामा । तर, नगरपालिकाले भने तीनसदस्यीय न्यायिक समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सुशासनका विषयवस्तु भएकोले नगरपालिका स्थानीयको अभिभावक र सरकारको एक अङ्गका रूपमा उभिएको छ ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूलाई विकासको मुद्दामा सहभागी बनाउन तपाईंको कस्तो भूमिका हुन्छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । यस विषयमा टोल टोलमा वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूले सबै राजनीतिक दलहरूलाई समावेश गराएर नै योजना छनोट भएको छ । राजनीतिक दलका इच्छानुसार नै योजना छनोटमा परेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नगर प्रमुख, उप प्रमुखलगायतको समिति रहेको छ । त्यसले कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्छ । कामलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरे पनि राजनीतिक दललाई नियमन र निगरानीको जिम्मा दिएका छौं ।
यो नगरलाई अन्य नगरभन्दा फरक रूपमा विकास गर्न नगरमा भएका सम्भावनाका क्षेत्र के के हुन् ?
अन्य नगरपालिका भन्दा धेरै राजमार्गसँग जोडिएको कटहरिया बजार पर्छ । धेरै नगरपालिकासँग नजीक र भारतीय सीमासँग पनि जोडिएकोले यो व्यापारिक क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । लालबकैया नदीको कोरिडोरमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भावना छ । त्यसलाई विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । उद्योगपतिहरूलाई केन्द्रित गर्न सय बिगाहाको ल्याण्डपुलिङ कार्यक्रम पनि शुरू गरेका छौं । कटहरिया नगरपालिकामा एकमुष्ट, एकै ठाउँमा जमीन उपलब्ध गराएमा उद्योगपति आउने र विकासको बाटो खुल्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादनसँगै उद्योग स्थापनाको सम्भावना पनि यो नगरपालिकामा छ ।
स्थानीय निकाय लामो समयदेखि कर्मचारीले सञ्चालन गर्दै आएकोमा हाल जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा कर्मचारीसँग समन्वयको समस्या छ कि छैन ?
स्थानीय तहको निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालेपछि कर्मचारीसँग कामको समीक्षा गर्दा उनीहरू अन्योलमा थिए । २० वर्षदेखि कर्मचारीले नै शासन गर्दै आएकाले जनप्रतिनिधिसँग गर्ने व्यवहार र कार्यको बारेमा थाहा पाएका थिएनन् । तर, विस्तारै उनीहरूले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र आफूले गर्ने कार्यको बारेमा थाहा पाउन थालेका छन् । कार्यालयले दिने सेवामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै सक्रिय छन् । कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
बोराकाये आइल्याण्ड बन्द भएपछि